Xiaomi Mi Mix Laab vs Galaxy Z Laabista 2 | Androidsis
Xiaomi Mi Mix Fold iyo Galaxy Z Fold 2
Qolka Ignatius | | Samsung, Xiaomi
Xiaomi Mi Mix Fold iyo Samsung Galaxy Fold 2
Marka Xiaomi ay soo bandhigto soo jeedinteeda ku saabsan laalaabka taleefannada, waxaa waajib nagu ah inaan sameyno isbarbardhigga u dhexeeya Xiaomi Mi Mix Fold iyo Galaxy Z Fold 2, Nooca ugu dambeeyay ee casriga ah ee isku laaban shirkadda Korea isla markaana uu ka cabbo nooca Xiaomi.
Samsung (Galaxy Fold) iyo Huawei (Mate X) la soo bandhigay ku dhowaad waqti isku mid ah horaantii 2019, oo hal maalin u dhaxeysa, casriga ugu horeeya ee suuqa soo gala, inkasta oo ay tahay qaabka Huawei, ugu dambeyn kama tagin Shiinaha. In kasta oo naqshaddii ay adeegsanaysay Samsung (buug-ku-qor) la naqdiyay oo shirkadda Huawei-na la ammaanay, haddana aakhirkii Samsung way saxsanayd oo way horseedday. Jiilka labaad ee Galaxy Fold, Galaxy Z laab 2 waxaa la soo saaray bishii Ogos 2020.
Markaan idhaahdo isagu wuu saxsanaa, waxay ahayd sababta ugu habboon ee talefanka gacanta lagu laabto ay tahay inuu gudaha ku laaban yahay, sida buug, taasi waa, lShaashadda isku laaban ayaa gudaha ku jirta marwalba, maaha sida Mate X oo shaashadiisu ku wareegsan tahay dhammaan qalabka aaladda iyo in markii la laalaabo, mid ka mid ah wejiyada uu noqday shaashad dibadeed.
Samsung, markaad isticmaaleyso naqshad u eg buug, fulisay shaashad dibedda ah, muuqaal gebi ahaanba madaxbannaan, cabirkiisuna si weyn ugu kordhay jiilkii labaad ee la bilaabay sanadkii hore.
Markaan idhaahdo Samsung waa saxay, sidoo kale waan idhaahdaa, maxaa yeelay dhawr sano ka hor, shirkadda Xiaomi soo dhigay muuqaal taas oo aad ku arki kartay a casriga oo leh shaashad isku laaban Naqshad la mid ah Huawei's Mate X, si kastaba ha noqotee, markii taleefannadan casriga ah si rasmi ah loo soo bandhigay, waxay isticmaashay naqshad buug oo la mid ah Galaxy Z Fold.
1 Galaxy Z Fold 2 vs Xiaomi Mi Mix Laab
1.4 Cabirka iyo culeyska
1.9 Qiimaha iyo helitaanka
Galaxy Z Fold 2 vs Xiaomi Mi Mix Laab
Xiaomi Mi Mix Isku laab
Sidaan kor ku soo sheegay, Xiaomi's Mi Mix Fold wuxuu adeegsadaa naqshad la mid ah tan Samsung ee Galaxy Fold (Xitaa way soo guuriyeen muuqaalka xayeysiinta), Naqshad gudaha u xirmeysa si loo ilaaliyo shaashadda isku laaban oo ku dareysa shaashad dhinac ah oo aan kula macaamili karno taleefanka casriga ah wakhti kasta anagoon si joogto ah u furin.
Labada xaaladoodba, shaashadda bannaanka ayaa aad u cidhiidhi ah jeclaan lahaa inaad ku raaxeysato filimada ama waxyaabaha ku jira warbaahinta badan. Dareenkan, shaashadda Xiaomi xitaa way ka cidhiidhsan tahay, markaa haddii aad filaysay isbeddel ku saabsan arrintan, kama heli doontid Xiaomi.
Mid kale oo ka mid ah kuwa kala duwan, waxaan ka helnaa shaashadda gudaha. Halka heerka cusbooneysiinta ee Shaashadda gudaha ee Xiaomi, nooca AMOLED waa 60 Hz, wuxuu gaaraa 90 Hz shaashadda kore.
Galaxy Fold 2 waa wax iska soo horjeeda, tan iyo shaashadda kore gaadho 120 Hz, waa nooca AMOLED shaashadda dibedda waxaa lagu dejiyaa 60 Hz oo ah heerka cusbooneysiinta.
Samsung Galaxy laab 2
Shaashadda gudaha ee Isku-darka Mi Mix waa 8,01 inji oo u dhigma 7,5 inji oo nooca Samsung ah. Shaashadda dibedda, marka laga hadlayo qaabka Xiaomi, waa 6,52 inji oo u dhigma 6,2 inji oo ah Laabka 2.
Galaxy Fold 2 waxaa la soo bandhigay Ogosto 2020 halka Mi Mix Fold la soo bandhigay March 2021 (7 bilood ka dib). Farqiga waqtigaan ayaa u oggolaaday shirkadda Kuuriya Howlgeli Qualcomm processor-kiisa ugu awooda badan maanta, Snapdragon 888 oo ay weheliso xulashooyinka xasuusta RAM ee kaladuwan sida booska kaydinta.
Galaxy Z Fold 2, waxaa maamula Qualcomm's Snapdragon 865+ wuxuu leeyahay 256GB oo keyd ah iyo 12GB oo RAM ah. Samsung kaliya waxay bixisaa hal nooc oo qalabkan ah, halka shirkadda Xiaomi ee ku taal Shiinaha ay bixineyso ilaa 3 nooc oo kala duwan oo RAM ah iyo keydinta.
Labada noocba waa la jaan qaada shabakadaha 5G, waxay ku daraan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 iyo NFC. Amniga waxaa bixiya a dareeraha faraha ee ku yaal mid ka mid ah dhinacyada aaladda.
Cabirka iyo culeyska
Haddii cabirrada taleefannadan isku laaban ay horay u ballaadheen, Qaabka Xiaomi ma uusan hagaajin, maadaama aysan ka ballaaranayn oo keliya, laakiin sidoo kale ka culus.
Galaxy Z laab 2 X x 159.2 68 16.8 mm X x 159.2 128.2 6.9 mm Gram 282
Xiaomi Mi Mix Isku laab X x 173.27 69.8 17.2 mm X x 173.27 133.38 7.62 mm Gram 317
El My Max Fold ayaa ku jira batari 5.020 Mah oo waxay taageertaa lacag-siinta degdegga ah illaa 67W. Samsung waxay dooratay batari 4.500 mAh ah la jaan qaadi kara deg deg ah ilaa 45W.
Xiaomi waxay si xoog leh ugu sharraxeysaa kamaradda 'Mi Mix Fold' oo leh a 108 MP muraayadaha waaweyn, muraayada telephoto 8 MP leh 3x zoom optical, a 13 MP xagal ballaaran iyo 8 MP macro sensor. Waxay awood u leedahay inay duubto fiidiyowyada tayada 8K.
Dhamaan muraayadaha indhaha ee ay bixiso Samsung Z Fold 2 waa 12 xildhibaan (muraayadaha waaweyn, xagal ballaadhan iyo xagal ballaadhan) oo ha u oggolaan in lagu duubo fiidiyowyada 8K. Way cadahay in dhammaan horumarintu ay Galaxy s21 ultra Waxaa lagu hirgelin doonaa Galaxy Z Fold 3 oo shirkadda Kuuriya ay soo bandhigeyso bartamaha sanadkan.
Markii aan fureyno Mi Miiska Isku laabma, waan la yaaban nahay ma helin kamarad sawir qaade ah, sidaa darteed wejiga hore oo dhan waa shaashad, oo aan muunad laga qaadin. Haddii aan rabno inaan sawir iska qaadno, waa inaan ku sameynaa taleefannada casriga ah ee laabma iyo 20 MP dareemahooda.
Samsung waxay na siisaa kamarad hore gudaha, si aan u awoodno u isticmaal taleefan casri ah furitaanka shirarka fiidiyaha, kamarad aan ka helno geeska bidix ee kore ee shaashadda iyo waxa caawiya hawlgalka fiiqan taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan laab laab ka dhigno oo aan dhigno meel fidsan.
Labada shirkadood waxay bixiyaan xalal badan oo wax ku ool ah oo ku saabsan taleefannada gacanta, in kasta oo ay tahay Xiaomi casriga ah waxaa maamula Android 10 halka Galaxy Z Fold 2 dhowaan la cusbooneysiiyey Android 11.
Xalka xiisaha leh ee Xiaomi na siiso waa suurtagalnimada u beddelo interface-ka casriga ah mid desktop ah, inkasta oo shaashaddan yar, haddana waxaan ka shakisanahay inaad wax badan ka faa'iidi karto.
Dareenkan, Samsung waxay na siineysaa DeX, xalka pKuu ogolaanayaa isku xirka shaashadda weyn siligga PC-ga leh Windows ama Samsung TV oo toos uga shaqee taleefanka casriga ah
Samsung kaliya ayaa bixisa laba hadla, mid ka mid ah dhinac kasta oo casriga ah, si kastaba ha ahaatee, Xiaomi weynaaday oo la hirgaliyay 4, laba dhinac kasta, marka marka ay timaado ku raaxeysiga filim, waxaan ka heli doonnaa tayo sare oo tayo leh qaabka Xiaomi.
haman / kardon waa shirkadda ka dambeysa dhawaaqa dejinta, shirkad waxaa iska leh Samsung 5 sano kahor.
Nooca ugu dhaqaalaha badan ee kala duwan Xiaomi Mi Fold, 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah, waxay ku kacaysaa RMB 9.999, qiyaastii 1.3000 euros Isbedelka. Kuwaas oo ay tahay inaan ku darno canshuuraha haddii ugu dambeyn la suuq geeyo meel ka baxsan Shiinaha, sidaas darteed qiimaha waxaa loo dejin karaa 1.500 ama 1.600 euro oo loogu talagalay qaabka 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah.
Nooca leh 12 GB oo RAM ah iyo 512 GB oo keyd ah Waxay ku kacaysaa 10.999 RMB, 1430 euro in la beddelo, halka nooca leh 16 GB oo RAM ah iyo 512 GB oo keyd ah oo taagan 12.999 RMB, 1.690 euro in la beddelo.
Ilaa maanta, waan heli karnaa Galaxy Z Fold 2 oo loogu talagalay 1.200 euro at Amazon, si aad ah uga hooseeya 2.000 ee euro ee qiimaha bilawga, qiimo ka badan xiisaha loo qabo wax kasta oo ay na siiso.
Waqtigan xaadirka ah laga bilaabo Xiaomi ma aysan shaacin taariikhda la bilaabayo ee Mi Mix Fold banaanka shiinaha, sidaa darteed waxay u badan tahay in jiilkan koowaad uusan ka bixi doonin Aasiya.
Xiaomi si toos ah ayuu u shaqeeyay iqulqulaya Galaxy Z Fold 2 iyo hagaajinta qaar ka mid ah astaamaha taas oo ay ugu wacan tahay arrimaha meelaha ka jira awgood.
Waxay u badan tahay, jiilka seddexaad ee casriga ah ee laaban karo ka Samsung sXalliyaan waxyaabaha ka duwan kaamirada iyo codka labadaba, labada dhibic ee qaabka Xiaomi uu si ballaaran ugu guuleysto.
In Androidsis, waxaan ka hadalnay dhowr jeer oo ku saabsan xanta ah in Samsung ay baraneyso sida loo sameeyo dimoqraadiyeynta taleefannada casriga ah ee laabmaya, oo waxay u badan tahay in sannadkan oo dhan, sii daayo nooc Lite ah, qiimo aad uga hooseeya 2.000 oo yuuro oo Galaxy Fold 2 oo dhawaan yimid suuqa ka galay.
Xilligan, waan iibsan karnaa Galaxy Z Fold 2 oo loogu talagalay 1.699 euro oo ku yaal bogga Samsung ama tag Amazon, halkaas oo aan ka heli karno in kabadan 1.200 euro, sidaan kor uga faallooday.
La jiilka saddexaad ee Galaxy Z Fold 3 Waxay u badan tahay in la sii daayo bartamaha Ogosto, markaa haddii aad damacsan tahay inaad iibsato taleefan casri ah oo isku laaban, waxaad u badan tahay inaad sugto dhowr bilood oo dheeri ah si aad uga faa'iideysato. In kasta oo qiimaha Galaxy Z Fold 2, shaqsi ahaan aanan wax badan ka fikiri doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Xiaomi Mi Mix Fold iyo Galaxy Z Fold 2
Sida loo rakibo adblock-ka Chrome ee Android
27-ka kulan ee ugu fiican Android oo leh kontaroole aanad seegi karin